सुर्खेतको बच्छीमा आगलागी : घर जलेर नष्ट, लाखौंको क्षेती « Rara Pati
सुर्खेतको बच्छीमा आगलागी : घर जलेर नष्ट, लाखौंको क्षेती
प्रकाशित मिति : ४ मंसिर २०७७, बिहीबार
४ मंसिर, सुर्खेत । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर १० बच्छीको १ घरमा बिहान करिब साढे दश बजे आगलागी भएको छ । लालशोभा कामी र रवि तिरुवा कामीको घरमा आगलागी भएको पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर १० का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
आगलागी हुँदा नगद धनमालसहित खाद्यान्न समेत जलेर नष्ट भएको बताइएको छ । पिडित परिवारका सदस्यले वडाध्यक्ष हरिप्रसाद ढकाललाई जानकारी दिएअनुसार आगलागीबाट सुन ४ आना १० लाल, १ लाख १० हजार नगद, १० तोला चाँदी बाला, २ बोरा मकै, १ बोरा गहुँ, ३ बोरा चामल, २ क्विन्टल पिँडालु र ३ लाख बराबरको घर क्षति भएको छ ।
पिडित परिवारले पञ्चपुरी नगरपालिका र अन्य सरोकारवाला निकायसँग राहतको लागि अनुरोध गरेका छन् । दशैँको समयमा घरबाट लडेर सोही घरकी पवित्रा कामीका दुईवटा हातहरू भाचिएका र अहिले उनी उपचारको क्रममा रहेको जानकारी समेत प्राप्त भएको छ ।
‘बेथिति’ विभाग : ५४ कर्मचारीलाई ८२ सवारीसाधन
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न जारी गरेको निर्देशिकामा सहसचिवसम्मलाई मात्र गाडी सुविधाको व्यवस्था
हवाई भाडा बढ्यो कहाँ जान अब कति भाडा ?
काठमाडौं । इन्धनको मूल्य बढेसँगै हवाई भाडामा पनि वृद्धि भएको छ । सोबार नेपाल वायु
लालपुर्जा खोज्दा मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र
काठमाडौं । जीवनको महत्त्वपूर्ण समयमा दुःख गरेर कमाएको रकम केमा खर्च गर्नुहुन्छ ? प्रायः नेपालीको
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ । निगम सञ्चालक